Ciidamada booliska oo dib u helay lacag dhan 1.4 milyan oo shillinka dalka ah – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidamada booliska oo dib u helay lacag dhan 1.4 milyan oo shillinka dalka ah
Saraakiisha baareysay lacagaha laga xaday gavana kuxigeenka ismaamulka Tharakanithi ayaa waxa ay sheegen in ay dib u Helen lacag dhan 1.4 milyan oo shillinka dalka oo kamid ahayd lacag dhan 3.5 milyan oo horay loogaga dhacay kuxigeenka gavanaha countiga Tharakanithi Eliud Mate waxana ay saraakiisha sheegen in ay sidoo kale soo xiren labo ruux oo lagu tuhunsan yahay in ay ku lug lahaayen lacagaha laga xaday Mr Eliud.
Booliska ayaa waxa ay sheegen in ay lacagahaas ka Helen sanduuq u bangiga ku leeyahay Constable Josphat Kipyegon oo ah nin horey ugu ahaa ilaaliye masuulka labaad ee ugu sareeyo countiga Tharakanithi.
Gavana kuxigeenka ayaa horey u sheegay in lacagaha intaas la eg loogaga qaaday qorey caaradiis.
Maalinta jimcaha ayaa waxa ay booliska sheegen in ay soo xiren nin lacagahaas sanduuqa u bangiga ku leeyahay Josphat Kipyegon ku shubay.
Waxa sidoo kale ay ciidamada soo xiren gabadh iyadana lagu magacaabo Rose Kajira oo saaxib lahayd ninkan booliska ka tirsan oo ay ciidamada soo xiren waxana gabadhaas la sheegay in ay tahay ardeyad wax ka barata jaamacada Mount Kenya University faraceeda Thika taas oo lala xiriirinaaya in ay sidoo kale ku lug leedahay lacagaha laga dhacay Mr Eliud.
Booliska ayaa waxa ay sheegen in 3 qof oo u ku jiro nin ka tirsan ciidamada booliska ee dhaca u geeystay gavana kuxigeenka iyo gabadaha iyo nin la sheegay in u bangiga ku xareeyay lacagaha hadda dib loo helay in lagu haayo saldhiga booliska ay ku leeyihiin magaalada Meru.
Warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegay in laga yaabo in masuulkaasi lacagaha laga xaday u kiiskaas iska daayo oo uusan eedeysanayaasha loo heysto in ay ka dhaceen lacagahaas uusan la tiigsanin maxkamadda.
← Gudiga EACC oo sheegay in wakiilada aqalka hoose ee countiga Kisii ay darmuusho ku soo iibsaden 8,000 oo shillinka dalka ah
Raila oo ugu baaqay gudiga IEBC in ay xafiisyada baneeyan →